Swedish badan oo dhabarka u jeediyay cunsuriyiinta SD | Somaliska
Swedish badan oo dhabarka u jeediyay cunsuriyiinta SD
Gudoomiyaha xisbiga cunsuriga ah ee Sverigedemokraterna (SD) Jimmie Åkesson ayaa isbuucyadii la soo dhaafay booqasho ku tagay magaalooyin badan oo ka tirsan Sweden isagoo goob kasta oo uu tago kala kulmay mucaarad fara badan.
Inkastoo hore uu ula kulmi jiray mucaaradka ayaa kuwii ugu dambeeyay waxay uga duwanaayeen in dadku ay isugu soo bexeen goobtii uu hadalka ka jeedin lahaa, iyagoo ka dibna dhabarka u jeediyay. Åkesson ayaa arintaas si weyn uga xumaaday maadaama dadkii uu khudbada u jeedin lahaa ay dhabarka u jeediyeen oo dhagaha ka furaysteen.
Mucaaradka ka dhanka ah SD iyo cunsuriyada ayaa bilihii la soo dhaafay noqday mid xiiso badan, iyadoo ay u muuqato in dad badan oo Swedish ah ay ka qeyb qaadanayaan. Markii uu Åkesson tagay magaalada Göteborg ayaa xaaladu faraha ka baxday iyadoo gacanta layskula tagay ka dibna uu go’aansaday in uu isaga noqdo. Åkesson ayaa sidoo kale mudaharaadyo ka kala kulmay magaalooyinka Gävle, Eskilstuna, Södertälje, Jönköping, Kungälv, Nässjö, Karlstad, Malung, Karlskrona iyo Arboga.
Dhinaca kale, ayaa dadka qaarkiis ku tilmaameen mudaharaadka nuucaan ah mid aan wanaagsanayn maadaama uu taageero cusub u abuuri karo xisbiga SD.
Åkesson ayaa ku tilmaamay dadka ka soo horjeeda in ay yihiin xagjir ka tirsan xisbiga bidixda (Vänsterpartiet). Balse quburada arimaha siyaasada ayaa ku tilmaamtay in kala duwanaanshaha dadka ka soo horjeeda SD ay keeni karto in ay hoos u dhacdo taageerada ay heli karaan doorashada soo socota
Agaasimaha xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen) oo shaqada laga cayriyay